अन्तरक्रियात्मक टिभी "Rostelecom": निर्देशन, वर्णन, जडान र सेटअप
प्रविधिको, केबल र वी
खराब छवि संग कम गुणस्तरको भिडियो हेर्न र एक चमकता तस्वीर बिस्तारै पृष्ठभूमिमा मा हराउँछ। आज, धेरै आँखा भर्चुअल प्रसारण च्यानल र उत्कृष्ट HD गुणस्तरीय मा प्रदर्शन मनपर्ने कार्यक्रम छन्। त्यो यस्तो अन्तरक्रियात्मक टेलिभिजन "Rostelecom" छ। धेरै मानिसहरू शुरू कन्फिगर गर्न कसरी निर्देशन, यसको पहुँच बावजुद, भ्रमित छन्।
हामी यो समस्या समाधान र सबैभन्दा स्थापना र ISP बाट टिभी कन्फिगर गर्न कसरी व्याख्या गर्न उपलब्ध गर्न प्रयास गरेका छन्।
कम्पनी "Rostelecom" के हो?
"Rostelecom" - सबै भन्दा ठूलो रूसी कम्पनीहरु पनि युरोप र पूर्व सीआईएस मा ज्ञात को एक। यस संस्थाको सार्वजनिक भुक्तान सेवा र संचार प्रदान मा माहिर। हाल9लाख को लामो फस्टाइरहेका चिन्ह छ, यो सेवा प्रदायक जडान गर्न प्रयोगकर्ताहरूको संख्या। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूप मा, अन्तरक्रियात्मक टेलिभिजन "Rostelecom" एकदम लोकप्रिय सेवा हो (आफ्नो बयान सेटिङ अनुसार सही क्रमबद्ध सबै च्यानलहरू अनुमति दिन्छ)।
बीच कम्पनीको ग्राहकहरु व्यक्तिहरूलाई, तर पनि सरकार, स्वास्थ्य, सुरक्षा र शिक्षा, सार्वजनिक उपयोगिता र सरकारी एजेन्सीहरू प्रतिनिधिको मात्र होइन पाउन सकिन्छ।
अन्तरक्रियात्मक टेलिभिजन सेवा र प्याकेजहरू को अवलोकन
हामी पहिले नै भनेका छन् रूपमा, भर्चुअल टिभी तपाईं उत्कृष्ट गुणस्तरको भिडियो हेर्न अनुमति दिन्छ। र न्यूनतम विज्ञापन वा पूर्ण यसको अभाव द्वारा, दृश्य खलबल बिना छ। तर, सेवा सक्रिय गर्न, तपाईँले पहिला "Rostelecom" (ITV) को उपयुक्त प्याकेजहरू चयन गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई बीच हामी निम्न कार्यक्रम भेद:
"तपाईंको सुरु-अप 2.0" (100 विभिन्न च्यानल पहुँच प्रदान गर्दछ)।
"तपाईंको सबै भन्दा राम्रो 2.0" (120 च्यानलहरू सम्म जडान गर्न मद्दत गर्छ)।
"तपाईंको उन्नत 2.0" (140 च्यानल पहुँच प्रदान गर्दछ)।
"तपाईंको अधिकतम 2.0" (170 सही च्यानलहरू जडान)।
कुल, यी सबै प्याकेजहरू, आधारभूत मध्यवर्ती र उन्नत रूपमा अवस्थित छन्। प्रारम्भिक चरण मा यो औसत संख्या मा च्यानलहरू अलिकति वृद्धि को एक सानो सूची जोडिएको छ, र "उन्नत स्तर" अन्तरक्रियात्मक टेलिभिजन च्यानलहरू आफ्नो अधिकतम महत्वपूर्ण पुग्न।
के च्यानलहरू सदस्यहरू उपलब्ध छन्?
तुरुन्तै सरल प्रक्रिया पछि च्यानलहरूको निम्न प्रकार उपलब्ध ग्राहकहरूले जडान गर्न:
संगीत र मनोरञ्जन।
धार्मिक र जातीय।
चलचित्र र टिभी शो।
उदाहरणका लागि, "तपाईंको ज्योति 2.0" प्याकेजमा6जानकारी समावेश 19 आवश्यक, 1 बच्चा,3संज्ञानात्मक,4संगीत, साथै मनोरञ्जन र धार्मिक च्यानलहरूको एक। तर, यी रोचक सबै मात्र, पाठ्यक्रम, सेट इच्छा अन्तरक्रियात्मक टिभी र भुक्तानी सेवा पछि उपलब्ध हुनेछ।
जडानहरू कुन प्रकार छन्?
काम गर्न अन्तरक्रियात्मक टिभीमा, तपाईं उपयुक्त उपकरण जडान गर्न आवश्यक छ। एकै समयमा यो विभिन्न तरिकामा गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले जडानहरू तीन प्रकारका भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ:
एक राउटर को मद्दतले।
पहुँच बिन्दु वाइफाइ मार्फत।
एक विशेष पीएलसी-एडप्टर, वा एडप्टरका साथ।
यहाँ र अन्तरक्रियात्मक टिभी "Rostelecom" जडान। माथिको विकल्पहरू सबै को मद्दतले यसलाई सेट लागि निर्देशन व्यक्तिगत जडान हरेक हालतमा संग छलफल गरिनेछ।
अन्तरक्रियात्मक टिभी "Rostelecom": रूटर जडान लागि निर्देश
टिभी जडान लागि सबैभन्दा सामान्य विकल्प को एक विशेष राउटर को प्रयोग हो। यसको अभिवृद्धि लागि पर्याप्त निम्न गर्न:
कन्सोलमा बक्समा (प्रवेश मा) बाट इन्टरनेट केबल सुत्छन्।
रूटर गर्न केबल जडान गर्नुहोस्।
तपाईंको टिभी गर्न कन्सोल (HDMI-कनेक्टर मार्फत) संलग्न गर्नुहोस्।
को आउटलेट मा उपकरण कर्ड घुसाउनुहोस्।
अधिकतम अतिरिक्त तार सुरक्षित र विशेष सुरक्षा वा गलीचे अन्तर्गत लुकाउनुहोस्।
र यदि लगभग तुरुन्त टेलिभिजन कार्यक्रम को प्याकेज "Rostelecom" पहुँच हुनेछ तपाईं खोल्दै पछि, सही गरेका। यस मामला मा मास्टर सेवा भुक्तानी गर्न प्रदान गरिएको छ, तर अवस्था मा जडान तपाईं आफ्नै गरिरहेका छन् भनेर।
वाइफाइ जडान गर्न संक्षिप्त पुस्तिका
यो जडान लागि, तपाईं पहिलो विशेष वायरलेस एडप्टर खरीद गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो नै ISP कन्सोलमा मा स्थापित र जडान गर्न आफ्नो आवश्यकता थियो। यहाँ कन्फिगर केहि आवश्यकता छैन। पूर्वनिर्धारित सेटिङहरू प्रयोग गर्न पर्याप्त।
यो विधि ती प्रयोगकर्ताहरूको कोठा भर केबल पुल चाहनुहुन्छ नगर्ने लागि उपयुक्त छ। तर, एक adapter खरीद अघि छैन सबै पसलहरु ब्रांडेड कन्सोल लागि उपयुक्त भएकोले, कम्पनी को प्रतिनिधिहरु संग परामर्श गर्न आवश्यक छ।
को पीएलसी-एडप्टर कसरी जडान गर्न?
जडान गर्न, तपाईंलाई एउटा विशेष उपकरण (पीएलसी-एडप्टर) आवश्यक हुनेछ। , एक लैन मा सबै तार जडान एडप्टर एक प्रकारको रूपमा एक पारंपरिक सकेट र प्रेरित मार्फत यसलाई जडान गर्नुहोस्।
सुरू गर्न, एडप्टर र टिभी वा कम्प्युटरमा केबल जडान गर्नुहोस्। नेटवर्क मा सबै उपकरणहरूमा गर्नुहोस् र च्यानल स्क्यान चलाउन। जडान को यो विधि फाइदा "Rostelecom" उपकरणहरू को एक नम्बर नै समय मा नेटवर्क जडान गर्न सक्ने क्षमता छ। इन्टरनेट जडान सेवाहरूको भुक्तानी नेटवर्कमा उपकरणहरू को जडान अघि छिट्टै प्रदर्शन।
सेवा प्रदायक तिर्न कसरी?
भुक्तानी र कम्पनीको सेवा "Rostelecom" जडान moscow.rt.ru ट्याब "भुक्तानी" मार्फत कम्पनीको वेबसाइटमा सीधा हुन सक्छ। र तपाईंले भर्चुअल वालेट र मोबाइल फोन को मदद संग, नक्सामा यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेवा मार्फत सेवाहरूको भुक्तानी बाहेक तपाईं उपयोगिता, RECHARGE तिर्न र पनि अर्को एक कार्डबाट रकम को स्थानान्तरण गर्न सक्छन्।
जडान कसरी कन्फिगर गर्न?
निम्नानुसार सेटिङ हो:
को (ए वी) मोड तपाईंको टिभी गर्नुहोस्।
अनलाइन जडान गर्नुहोस्।
"लगइन" चयन गर्नुहोस् र तपाईँको पासवर्ड प्रयोगकर्ता नाम (करार निर्दिष्ट) प्रविष्ट गर्नुहोस् देखिन्छ कि मेनु को मद्दतले।
"जडान" मा क्लिक गर्नुहोस्।
दायाँ गरेको छ भने, टिभी स्क्रिनमा माथि कार्य पछि च्यानलहरूको सूची प्रर्दशन गर्दछ। यो कन्फिगरेसन सफल भयो भन्ने हो।
बस र affordably - आफ्नो हातले टिभी एन्टेना
को "तीन रंगीए" किन देखाउन गर्दैन छ? "तीन रंगीए" भुक्तानी पछि देखाउन छैन। मुक्त च्यानल नदेखाउनुहोस् "तीन रंगीए"
"0" "तीन रंगीए टिभी" गर्न त्रुटि - के, कसरी मिलाउने?
कसरी टिभी "सैमसंग" को "स्मार्ट टिभी" कन्फिगर गर्न? च्यानल "स्मार्ट टिभी" टिभी "सैमसंग"
किसमिस वा जामुन संग घरेलु पनिर casserole
पाल्मा होटल4* (बुल्गारिया, स्वर्ण बालुवा): फोटो र समीक्षा
विवाहको साक्षीहरूको अद्भुत र सम्मानजनक भाषण
हामी सुत्केरी आमाले प्यानकेकहरू गर्न सक्नुहुन्छ? हामी सिक्न!
खाना पकाउने सूप उज़्बेक
यो सम्भव गर्भावस्था बेला नङ वृद्धि गर्न छ: contraindications
बच्चा अक्सर सानो मा शौचालयमा जान्छ। यसको अर्थ के हो?
को खुट्टा मा अल्सर: समस्या संग संघर्ष